Mpamatsy aspirinina sy orinasa | Mpanamboatra Aspirator China
Mpifantoka oksizenina ANGEL-5S
Masinina elektrika (siny kambana)
Masinina suction Portable AngelBiss, miaraka amin'ny famoronana sy azo entina. Ny foto-kevitry ny masinina momba ny endrika endrika nohafarana avy any Alemana. Avy amin'ny endrik'olona hitan'ny maso, miaraka amina firafitry ny firafitra vaovao, mandeha mora, ny endriny manontolo amin'ilay milina fitrohana azo entina dia tsara sy tsotra.
AngelBiss Portable Suction Machine dia mandeha amin'ny herin'ny herinaratra. Miaraka amin'ny tombony miavaka: ambany tabataba, tsy misy menaka, habe mahafinaritra, maivana ary fametrahana mora kokoa. Ary ny vatan'ny masinina dia plastika ABC feno, mamirapiratra sy malama. Izy io dia nanisy tavoahangy fisotroana 1400ml, fahaiza-manao lehibe.
Ny AngelBiss Portable Suction Machine dia ampiharina amin'ny rafitra tavoahangy Direct Plug-in tavoahangy sy rafitra fiarovana avo roa heny.
Izy io dia azo ovaina kokoa mba hampiasaina amin'ny toe-javatra maika isan-karazany sy ho an'ireo fepetra takiana amin'ny serivisy.
Ny AngelBiss Portable Suction Machine dia ampiasaina hitsentsitra ranon-javatra isan-karazany, toy ny pus, phlegm ary ra. Izy io dia fitaovana fitsaboana mahazatra ampiasaina amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fitsaboana nify ary ny vonjy taitra na efitrano fandidiana.
Azo ampiasaina amin'ny fikarakarana ao an-trano ny milina fanentanana AngelBiss Portable. Ny masinina dia kely habe ary tena maivana. Ary tsotra sy mora ny mampandeha azy.
Masinin-tsofina Portable Dentistry
Natao manokana ho an'ny rindranasa misy toetran'ny tsindry raikitra sy ny tsindry, ny milina fitrohana azo entina dia manolotra fomba haingana sy mahomby hanadiovana ny ra, na ranoka ara-pitsaboana hafa mandritra ny fitsaboana ny nify.
Masinina suction Portable AngelBiss miaraka amin'ny rafitra tavoahangy Direct Plug-in tavoahangy sy rafitra fiarovana avo roa heny. Natao manokana ho an'ny rindranasa misy toetran'ny tsindry raikitra sy ny tsindry, ny milina fitrohana azo entina dia manolotra fomba haingana sy mahomby hanadiovana ny ra, na ranoka ara-pitsaboana hafa mandritra ny fitsaboana ny nify.
AngelBiss Electric Suction Machine (jar kambana) misy tavoahangy lehibe (2500ml / tavoahangy tsirairay), afaka mifoka rano be dia be izy mandritra ny fandidiana. Ary hanome ny vahaolana tsara ho an'ilay olona mampiasa azy io. Ary mora ny manadio amboary ary alamino.Ary ho an'ny tavoahangy dia hampiasaina indray aorian'ny fanadiovana azy.